पोखराका कलाकारले स्व. रविन्द्र अधिकारीलाई आफ्नो क्यानभासमा उतारेका छन् ।
फागुन १५ नजिकिँदै गर्दा प्रथम स्मृति दिवसका सन्दर्भमा कलाकारले ‘क्यानभासमा रवीन्द्र’ शीर्षक दिएर उनको व्यक्तित्व र कामलाई क्यानभासमा उतारेका हुन् ।
विभिन्न चित्राकृतिबाट रवीन्द्रको व्यक्तित्वलाई क्यानभासमा उतारिरहेका कलाकार एवं कार्यक्रमका संयोजक रमेश श्रेष्ठले भने, ‘मैले वर्षौंदेखिको मित्रता गुमाएको एक वर्ष पुग्यो । उहाँलाई क्यानभासमा उर्तान मलाई पीडा भइरहेको छ । शब्द हराएको छ, आँखा अगाडि उहाँको हँसिलो अनुहारले मेरा हातलाई अल्झाइरहेको छ । फेरि पनि एउटा प्रयास गरिरहेको छु ।’
कलाकार देवी राईले रवीन्द्रको व्यक्तित्वबाट आफू प्रभावित भएको र त्यसैलाई क्यानभासमा उतारेको बताए । ‘मैले धेरै चोटी उहाँलाई भेटेको छु, सधैं म उहाँको आदर्श व्यक्तित्वबाट प्रभावित भएको थिए । आज उहाँ हाम्रो माझ हुनुहुन्न, कलाको माध्यमबाट सम्झने प्रयास गरेको छु,’ उनले भने ।
कलाकार कमल गुरुङले रवीन्द्रलाई विकासप्रेमी नेताका रुपमा चित्राकृतिमा उतारेको बताए । ‘देशको एक विकासप्रेमी नेताका रूपमा चिनेको थिए, उहाँलाई दूरदृष्टि भएको नेताको आत्मविश्वासको अनुहारलाई ‘फोकस आउट’ गरेको छु,’ उनले भने ।
कार्यशालामा पोखरा र काठमाडौंका १५ कलाकारको सहभागिता थियो । सिर्जना गरिएका कला फागुन १५ गते रवीन्द्र अधिकारी स्मृति दिवसमा प्रदर्शन गरिने संयोजक श्रेष्ठले बताए ।
रवीन्द्र अधिकारी स्मृति प्रतिष्ठानले स्व. अधिकारीको प्रथम स्मृतिमा कला कार्यशालाको आयोजना गरेको हो । गत वर्ष फागुन १५ गते ताप्लेजुङमा हेलिकोप्टर दुर्घटनामा परी अधिकारीसहित ७ जनाको निधन भएको थियो । उनको ‘समृद्ध नेपाल’ र ‘लोकतन्त्र तथा संविधानसभा र राज्य पुनर्संरचना’ २ पुस्तक प्रकाशित छन् । अधिकारीको सम्झनामा गत जेठ १८ गते प्रतिष्ठान स्थापना गरिएको थियो ।